ကျေးရွာရေရရှိရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ | MoeMaKa Burmese News & Media
နိဝင်ဘာ ၁၂ ရက်၊၂၀၁၂
ကျေးရွာရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများကို လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်ကစ၍ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိနှိင်ငံတော်အစိုးရ၏ ကျေးရွာရေရရှိ ရေးဌာန၊ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတစ်ရပ် အနေနှင့်ကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူများသန့်ရှင်းသောေ သာက်သုံးရေရရှိရေးအတွက်မြေအောက်ရေတူးဖေါ် ရရှိနှိင်မည့်နေရာဒေသများတွင် စက်ရေတွင်းများတူးဖေါ်ပေးခြင်း၊မြေအောက်ေ ရတူးဖေါ်ရန်ခက်ခဲသည့်ဒေသ၊တူးေ ဖါ်၍မရနှိင်သည့်ဒေသများအတွက်အနီးအ နားဝန်ကျင်ရှိမြေပေါ်ရေအရင်းအမြစ်များမှရေကိုရေသွယ်ပိုက်ဖြင့်သွယ်ယူဖြန်ဝေပေးခြင်း၊ (ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊တောင်ဇင်းရေပေးဝေရေး)လုပ်ငန်းများကို မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ဧရာဝတီတိုင်းတို့တွင်စနစ်တကျ၊တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့်ပညာရှင်များ ကဦးဆောင်ပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ထိုစဉ်ကဖြန့်ဝေပေးသည့်သောက်သုံးရေ၊အရည်အသွေးကိုအမျိုးသားကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲခမ်း(National Health laboratory) ကတာဝန်ယူ စမ်းသပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ စက်ရေတွင်းပေါင်း ထောင်ကျော်ကိုတိုင်းအလိုက်မှတ်တမ်းများစနစ်တကျ ထားရှိခဲ့ကြပါသည်။(ထိုမှတ်တန်းများကကျေးရွာရေရရှိရေးစီမံကိန်း၊ကနဦးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုခဲ့ပါသည်)
● ရေဆယ်စုနှစ်၊ ကျေးရွာရေရရှိရေးစီမံကိန်းစတင်ခြင်း
၁၉၈၀-၈၁ ခုနှစ်ကစ၍ ကျေးရွာရေ၇ရှိရေးဌာနခွဲ၊ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနသည်မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းအပူပိုင်းဒေသ၊ ကျေးရွာရေရရှိ ရေးစီမံကိန်း၊ [(Village Water Supply Project (Dry Zone) Burma] လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကိုပဋ္ဌမရေဆယ်စုနှစ်ကာလ (1st Water Decade 1981-1990) အတွင်းအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နှိင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစီမံကိန်းကြီးကို(UNICEF)၏အစီအစဉ်အထောက်အပံ (ယူအက် (စ်) ဒေါ်လာ ၄၆ သန်းဟုယူဆပါသည်။)ပေးခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) နှင့် Netherlands , Australia တို့ကလည်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်သည့် အထောက်အပံများပေးခဲ့ပါသည်။Coffey & Partner (Australia) ကနည်းပညာအတိုင်ပင်ခံနှုင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ် ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထိုအပြင်အဆိုပါစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်မြန်မာအင်ဂျင်နီယာများ၊ဘူမိဗေဒပညာရှင်များကိုလည်းနှိင်ငံ တကာအဆင့်မြင့်နည်းပညာများရရှိရန်နှိင်ငံခြားပညာတော်သင်များစေလွတ်နှိင်ခဲ့ခြင်း၊ ပြည်ပကျေးရွာရေရရှိရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်လေ့လာရေးခ ရီးများပြည်ပလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများစေလွတ်ခဲ့ပါသည်။
(UNICEF)အဖွဲ့အစီအစဉ်ဖြင့်အစ်ဇရေးနှိုင်ငံ(Israel) မှမြေအောက်ရေရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူနည်းပညာရှင်များကိုဌားရမ်း၍ ဘူမိ ဗေဒဘွဲ့ရ ကျေးရွာရေရရှိရေးဝန်ထမ်းများအား ဘူမိရူပဗေဒဆိုင်ရာမြေအောက်ရေစူးစမ်းရှာဖွေနည်းပညာရပ်များကိုသင်ယူစေခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက်စက်ရေတွင်းတူးလုပ်ငန်းထောက်အကူပြု၊အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးကရိယာများဖြစ်သောမြေအောက်ရေစူးစမ်းလေ့လာတိုင်းတာသည့်ဘူမိရူပဗေဒဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ(Surface Geophysical Survey Equipments / Terra-meters SAS 300) နှင့်တွင်း တိုင်းဘူ မိရူပဗေဒဆိုင် ရာစက်ပစ္စည်းများ (Sub-surface Geophysical Survey Equipments / Bored Hole Geophysical Logging units) ၀ယ်ယူအသုံးပြု နိုင်ခဲ့ပါသည်။
အခြေခံပညာ၊အထက်တန်းအဆင့်ရှိကျေးရွာရေရရှိရေး၊လူငယ်ဝန်ထမ်းများအားစာတွေ့လက်တွေ့၊အဆင့်မြင့်စက်ရေတွင်းတူးသင်တန်းများ (Drillers and Drilling training) ပေးခဲ့ခြင်းဖြင့်စက်ရေးတွင်းတူးလုပ်ငန်းများကိုနှိင်ငံတကာအဆင့်မှီလုပ်ဆောင်နှိင်ပြီးစက်ရေတွင်းတူးကျွမ်းကျင်သူများရရှိစေခဲ့ပါသည်။
ပေ-၈၀၀-၁၀၀၀ အထိတူးနှုိင်သောစက်ရေတွင်းတူးစက်များ၊လုပ်ငန်းသုံးတွင်းတူးပိုက်များ၊လွန်သွားများစသည့်အထောက်အကူပြုများ၊(Wheel / Truck mounted Drilling machines with Mud pumps and drilling rods, bits & accessories) ရေထုတ်ပိုက်များ၊ရေစစ်ဇကာများ၊ (Pipes /casing and Screens, assorted size;4” to 8”) ၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများသယ်ပို့ယဉ်များ၊(Truck cars) ရေသယ်ယဉ်များ၊(Water Boxers) လောင်စာဆီသုံးရေတင်စက်များ၊ (Diesel engine Type Water Pumps)နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးရေတင်စက်များ၊(Solar power type Water Pumps)၊၀ယ်ယူအ သုံးပြုခဲ့ပါ သည်။၊လက်နှိပ်ဒုံကင်(Hand Pumps)များကိုပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သည့်အလုပ်ရုံ တည်ထောင်၍အသုံးပြုခဲကြပါသည်။
တူးဖေါ်ပြီးစီးသည့်စက်ရေတွင်းများမှရေကိုသောက်သုံးရန်သင့်၊မသင့်ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဓါတ်ခွဲခမ်းသုံးပစ္စည်းကရိယာများနှင့်ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာရီအေဂျင့်များ၊(Laboratory Apparatus & Equipments and Chemical Reagents) ကိုနှိင်ငံခြားမှမှာယူတင်သွင်းပြီး ရေစမ်းသပ်ဓါတ် ခွဲခန်း တစ်ခုကိုလည်းရန်ကုန်မြို့အမှတ်(၅) ကျေးရွာရေရရှိရေးစက်စခန်းအတွင်းဖွင့်လှစ်ထားရှိနှိင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအပြင်စက်ရေတွင်းတူးအဖွဲ့များတွင်လည်းတွင်းတူးလုပ်ငန်းခွင်သုံးရှေ့ပြေး၊ရေအရည်အသွေးစမ်းသပ်ကရိယာများဖြစ်သောပီအိပ်(ချ)မီတာ၊အီစီမီတာများ(pH Meter / EC meter)ကိုအသုံးပြုစေခြင်းဖြင့်ရေ၏အက်စစ်(သို့)အလ်ကာလီမည်မျှပါကြောင်း အညွန်းကိန်းနှင့်အီစီကို ကိန်းသေ ဂ ဏန်းတစ်ခုဖြင့်မြောက်၍ရသောတန်းဘိုး၊ရေတွင်ပျော်ဝင်သည့်ဓါတ်ဆားပမာဏ(Total Dissolve Solids ‘TDS’) ကိုအခြေခံပြီး သောက်သုံရေ အဖြစ်သင့်၊မသင့်ကြိုတင်သိရှိနှိင်ပါသည်။
ထိုစီမံကိန်းကြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာမြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း၊မိုးခေါင်ရေရှားဒေသ၊(မန္တလေးတိုင်း၊စစ်ကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း)အတွင်းစက်ရေတွင်းပေါင်း(၃၀၀၀)ကျော်တူးဖေါ်၍ရေတင်စက်များတပ်ဆင်ပေးခြင်း(Design & construction of Tube wells and installation of
pumping units)။ချင်းပြည်နယ်၊ တီးတိန်မြို့နယ်အတွင်း၊စိမ့်စမ်းရေသွယ်လုပ်ငန်း(Gravity flow Pipe Water Supply System)။ မကွေးတိုင်း အ တွင်းမြေအောက်ရေတူးဖေါ်ရရှိရန်ခက်ခဲပြီးမြေပေါ်ရေအရင်းအမြစ်(မြစ်၊ချောင်း)များမှဝေးလွန်းသည့် ကျေး ရွာများအတွက်ထိုကျေးရွာ အနီးအနား ရှိမြေအောက်ရေပေါများစွာထွက်ရှိသောစက်ရေတွင်းမှရေများရယူ၍သောက်သုံးရေဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ စုပေါင်းကျေးရွာရေရရှိရေး လုပ်ငန်း၊(VillageGroup Pipe Water Supply System)။ မန္တလေးတိုင်း၊ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊တောင်စွန်းမြစ်ရေတင်လုပ်ငန်း၊ အဆင့်မြင့် တင်ပေးခြင်းစ သည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။လူဦးရေသုံး၊လေးသန်းကျော်ကိုသန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိစေပါသည်။
ကျေးရွာရေရရှိရေးဌာနခွဲ(စက်မှုူလယ်ယါဦးစီးဌာန)မှဦးစီး၍ရေရရှိရေး၊အသုံးချရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲများကိုလည်းနှစ်စဉ်ကျင်းပနှိင်ခဲ့ပါသည်။အပူပိုင်းဒေသရေရရှိရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကိုအခြေခံရေးသားသည့်စာတမ်းများကိုဖတ် ကြားကြပါ သည်။ထိုစာတမ်းဖတ်ပွဲများသို့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ကျန်းမာရေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့လွန်အသုံးချဘူမိဗေဒဦးစီးဌာန၊ရန်
ထိုပြင်နည်းပညာအတိုင်ပင်ခံနှုင့်ပညာရပ်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအဖွဲ့။Coffey & Partner (Australia) နှုင့်ကျေးရွာရေရရှိ ရေး ဌာနမှဇလဘူမိဗေဒပညာရှင်များပူးပေါင်း၍မန္တလေး၊စစ်ကိုင်းနှုင့်မကွေးတိုင်းများအတွင်းတူးဖေါ်ပြီးခဲ့သည့်စက်ရေတွင်းမှတ်တမ်းများနှုင့် စက်စခန်း အသီးသီးရှိဇလဘူမိဗေဒပညာရှင်ဝန်ထမ်းများရေဆွဲထားသောဇလဘူမိဗေဒနှုင့်မြေအောက်ရေအချေပြမြေပုံများကိူအချေခံ၍မြန်မာနှုိင်ငံအလယ်ပိုင်း ၏ဇလဘူမိဗေဒဆိုင်ရာစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုမှတ်တန်းတင်ပြုစုနှိုင်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါစာအုပ်မူရင်းတစ်အုပ်သည်(Australia) နှိင်ငံအစိုးရ အမျိုး သားစာကြည့်တိုက်(National Library of Australia)တွင်အခန့်သားရှိနေပါသည်။
နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကအသိအမှတ်ပြုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်းအပူပိုင်းဒေသ၊ကျေးရွာရေရရှိရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းကြီးပြီးခါနီးကာလနောက်ပိုင်း၊ ၁၉၈၈ အရေးအခင်းနောက်ပိုင်း၊ န၀တစစ်အစိုးရလက်ထက်တွင်ပြည်နယ်နှုင့်တိုင်းအ သီးသီး ရှိတိုးချဲ့မြို့သစ်များရေရရှိရေးကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာကျေးရွာရေရရှိရေးစက်စခန်းအသီးသီးမှဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။နှိုင်ငံတ၀ှမ်းအသစ်ထပ်မံတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခဲ့သောစစ်အခြေစိုက်စခန်းတပ်ရင်းများရေရရှိရေးနှုင့်မြေအောက်ရေတည်ရှိနိုင်မည့်အချေအနေများသိရှိရန်မြေပေါ်ဘူမိရူပဗေဒစူးစမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ(Surface Geophysical Survey) ကိုလည်းလုပ်ကိုင်ပေးနှိုင်ခဲ့သဖြင့်မြေအောက်ရေရရှိနှိင်မှု အခြေအနေများကိုပညာ ရပ် ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများရရှိရပါသည်။
မဟာရန်ကုန်နယ်နမိတ်နှုင့်နယ်နမိတ်ပြင်ပအသစ်တိုးချဲတည်ဆောက်သည့်တောင်ဒဂုံ၊မြောက်ဒဂုံ၊ရွှေပြည်သာ၊လှူုိင်သာယာာ၊ရွှေပေါက်ကံဝေဘာကီ(မြောက်ဥက္ကာ)၊ ငါးဆူတောင်(မဟာရန်ကုန်ပြင်ပရှိ) စသည့်မြိုသစ်များရေရရှိရေး (ဌာနဆိုင်ရာရပ်ကွက်များ၊ လူမှုဖူလုံရေးဆေး ပေး ခန်း၊ကျောင်းများစသည်) တို့အတွက်ကျေးရွာရေရရှိရေးဌာနခွဲ၊ ရန်ကုန်ရုံးချုပ်မှမြေပေါ်ဘူမိရူပဗေဒတိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊ အမှတ်(၅) ကျေးရွာရေရရှိရေးစက်စခန်းမှ စက်ရေတွင်း များတူးဖေါ်ပေးခဲ့ ပါသည်။
ကျေးရွာရေရရှိရေးဌာနခွဲ၊ရန်ကုန်ရုံချုပ်မှဇလဘူမိဗေဒ၀န်ထမ်းများ (Hydrogeologists) သည်မဟာရန်ကုန်နယ်နမိတ်အတွင်း၊မြို့နယ်ပေါင်း(၃၀)တွင်မြေအောက်ရေနှင့်စက်ရေတွင်းများမှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်း၊ရေနမူနာကောက်ယူခြင်းနှင့်ရေဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ (Groundwater & Wells Inventory and Tube wells’ water sampling & testing and Analysis) ကို (၁၉၉၁-၁၉၉၂ခုနှစ်) ကလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်၊ထိုစဉ်ကစက်ရေတွင်းပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်၏မှတ်တမ်းများကိုမဟာရန်ကုန်၊မြေအောက်ရေနှ့င်စက်ရေတွင်းများဆိုင်၇ာ၊ ဇလဘူမိဗေဒ စူးစမ်းလေ့လါရေးစီမံကိန်း(Groundwater & Wells Inventory and Hydrogeological survey) ၏အဆင့်(၁) နေနှင့်လုပ်ဆောင်နှိင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်ကစက်ရေတွင်းမှတ်တမ်းကောက်ယူနှိင်မူပမာဏမှာဋ္ဌာနဆိုင်ရာငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်ပမာဏ၊၀န်ထမ်းအင်အားနှင့်အချိန်ကာလအရ၊မဟာရန်ကုန်နယ်နမိတ်အတွင်း၊ပြည်သူလူထုသောက်သုံးေ၇နှင့်စက်၇ုံအလုပ်၇ုံ(Potable for domestic and factories’ use) သုံးစက်ရေတွင်းပေါင်း၏ သုံပုံတစ်ပုံခန့်သာကောက်ယူနှိင်ခဲ့ပါသည်။(ဇလဘူမိဗေဒ၊မြေအောက်ရေနှင့်စက်ရေတွင်းများအကြောင်းအခြေအနေပေးပါကဆက်လက်ရေးသားပါမည်။) ထိုစဉ်ကမဟာရန်ကုန်မြို့၏လူဦးရေမှာ၅သန်းကျော်နှင့်စက်မှူဇုံပေါင်း (၁၀)ကျော်မှ သည်ယုခုအခါလူဦး ရေ(၆)သန်းကျော်ရှိလာကြောင်း သတင်းဂျာနယ်များမှတဆင့်သိရှိရပါသည်။
ကျေးရွာရေရရှိရေးဌာနမှစာရေးသူအလုပ်နှတ်ထွက်ပြီးနောက်၊ ၁၉၉၅- ခုနှစ်ကာလနောက်ပိုင်းန၀တစစ်အစိုးရ၏စီမံမှုဖြင့် ကျေးရွာရေရ ရှိရေးဌာနခွဲကိုစက်မှူလည်ယာဦးစီးဌာနမှခွဲထွက်စေ၍ဆည် မြောင်းဦးစီးဌာန၊ မြေအောက်ရေဌာနခွဲနှင့်ပူ့းပေါင်းပြီးရေအရင်းအမြစ်များအ သုံးချရေး ဦးစီးဌာနကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။အဆိုပါဌာနမှစက်ရေးတွင်းတူးစက်အချို့ကိုရယူပြီးအများစုကိုလည်းနယ်စစ်/စည်ပင်သို့လွဲပြောင်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရ့ပါသည်။
ကျေးရွာရေရရှိရေးစီမံကိန်းကြီးမှကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့သည့်စက်ရေတွင်းနှင့်ရေတင်စက်ပေါင်း(၃၀၀၀)ကျော်သည်ယခုအခါမည်သို့ရှိမည်ကိုစက်ရေတွင်းမှရေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည့်ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများသိနှိင်ပါသည်။ထိုကျေးရွာသူကျေးရွာသားများအကူအညီရယူ၍အစိုးရဌာနတစ်ခုခု(သို့)အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကဦးဆောင်ပြီးကွင်းဆင်းစစ်တမ်းကောက်ယူသင့်ပါသည်။အဆိုပါစက်ရေတွင်းမှတ်တမ်းအပြည့်အစုံသည်ရေအရင်းအမြစ်အသုံးချရေးဦးစီးဌာနတွင်ရှိ်ပါသည်။ကွင်းဆင်းစစ်တမ်းကောက်ယူရာတွင်လည်းမူလစက်ရေတွင်းမှတ်တမ်းပါအချက်အလက်များကိုအချေခံ၍ပြည့်စုံသောစစ်တမ်းများရရှိအောင်ကောက်ယူသင့်ပါသည်။ထိုစစ်တမ်းကိုအခြေခံ၍စက်ရေတွင်းနှင့်ရေတင်စက်များကိုတိုင်းအလိုက်၊မြို့နယ်အလိုက်၊ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက်၊မည်သည့်ပြုပြင်မှူမျိုး (Well Rehabilitation and / or Pumping Unit Rehabilitation; both)ပြုလုပ်ရ မည် ကိုခွဲခြားစါရင်း ပြုသင့် ပါသည်။(စက်ရေတွင်းဆိုင်ရာပြုပြင်နည်းများကိုလည်းအချေအနေပေးပါကဆက်လက်ရေးသားပါမည်၊) အဆိုပါစာရင်းကိုစက်ရေတွင်းတည်နေရာပြမြေပုံနှင့်တကွနှိင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော(UNICEF, UNDP, WHO) တစ်ခုခုတို့နှင့်တင်ပြ ဆွေးနွေး သင့်ပါ သည်။ ကျေးရွာရေရရှိရေးစီမံကိန်းကြီးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော ၀န်ထမ်းဟောင်းများသည်အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင် လျက်ရှိကြပါသည်။လုပ်ငန်းများရယူနှိင်ပါကနှိင်ငံအတွက်အကျိုးများစွာရရှိမည့်မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း၊အပူပိုင်းဒေသရှိတူးဖေါ်ပြီးစက်ရေတွင်းများပြန်လည်ပြုပြင်ရေးစီမံကိန်း (Villages’ Tube Wells Rehabilitation, Dry Zone, Central Myanmar) လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိင်ပါသည်။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:Maung Kyay Yay, သတင်းဆောင်းပါး, သူတို့အာဘော်, လောကဓာတ်ခန်း
One Response to ကျေးရွာရေရရှိရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ
Wan Maung on November 12, 2012 at 6:55 pm
Dear Maung Kyay Ye,
I do not know who you are; but I presume your are our close friend, worked together at RWSD until I resigned in 1990. I am Wan Maung, at present working in Cambodia. I apologize I could not type in Myanmar therefore I am writing this comment in English. I would like to communicate with you and if you arre still interested in RWSD, please contact to me through wanmaung2010@gmail.com.